I-Apple inokumilisela i-Apple Watch Series 3 ngo-Septemba | Ndisuka mac
I-Apple inokumilisela i-Apple Watch Series 3 ngo-Septemba
Izinto ezinxibekayo ziluhlobo lwesixhobo esingakhange siphumelele kwintengiso, ngaphandle kwento yokuba bonke abasebenzisi esinabo, umzekelo iApple Watch, bonwabile kakhulu ngabo, ikakhulu ngenxa yokusebenza okusinika yona, ngakumbi ukuba sichitha ixesha elininzi kude nekhaya, kuba iyasivumela ukuba siqwalasele kwaye siphendule naluphi na uhlobo lwezaziso, nokuba ziyimiyalezo okanye ziifowuni. Isizukulwana sesibini siziswe njengezona zinto ziphambili zintsha ze-GPS chip kunye nokumelana namanzi, okuqinisekisa ukuba izinto ezintsha kweli candelo zilinganiselwe.
Kuthathe i-Apple iminyaka emibini ukumilisela isizukulwane sesibini se-Apple Watch, isizukulwana esangena phantsi kwegama Series 1 kunye Series 2 ngelixa imodeli yesizukulwana sokuqala yayingenalo naluphi na uhlobo lwegama. Ekupheleni konyaka ophelileyo, iApple yakhupha isizukulwana sesibini seApple Watch kodwa ngokwenani elikhulu lamahemuhemu avela e-China, u-Apple angabonisa isizukulwana sesithathu, okanye i-Series 3 ekupheleni kwalo nyaka, kanye ngenyanga kaSeptemba, isixhobo esiza kuboniswa kunye ne-iPhone entsha.
Ukuvela kweemarike ezinxitywayo akukhawulezi njengoko bekunjalo kwihlabathi leefoni, ke akunakulindeleka ukuba kulo nyaka, abafana baseCupertino bayihlaziye kwakhona iApple Watch. Eyona nto intsha abanokuyilindela abasebenzisi kwisizukulwana sesithathu se-Apple Watch kukuba isinika ithuba lokuba sikwazi ukusebenzisa i-chip ye-LTE, eya kuthi isuse ukuxhomekeka okusinika i-iPhone okwangoku, ukuxhomekeka kuncitshisiwe ubuncinci ngokudityaniswa kwe-chip ye-GPS kwiimodeli zothotho lwe-2, ukuthintela abanomdla kwezemidlalo ekubeni bathathe i-iPhone yabo bayokuyilolonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple inokumilisela i-Apple Watch Series 3 ngo-Septemba
Iqala ukundidinisa ukuba iApple ibonakala ngathi inecandelo lekhompyuter elishiyiweyo ngokupheleleyo nezixhobo eziphelelwe lixesha. Umzekelo, iMac Pro, ayihlaziywanga iminyaka emi-3. IMac Mini iphethe iprosesa yesizukulwana sesine, xa iiPC sele zikwindawo yesixhenxe. Emva koko bahlaziya iMacBook Pro kwaye bayikhupha nge-skylake processor, endaweni yelibi ye-kaby, ene-16Gb yememori (i-DDR3 endaweni ye-DDR4) ubuninzi ngaphandle kokubakho kolwandiso lwexesha elizayo kwaye kubize kakhulu kunesiqhelo ngenxa yobuyatha ibha yokuchukumisa. Nangona kunjalo izixhobo eziphathwayo, nokuba yiphone, ipad okanye iWatch ukuba bazihlaziya rhoqo. Kubonakala kucacile ukuba icandelo abagxile kulo kwiinzame zabo kwaye abathengi abathenga iikhompyuter zabo bayaphulukana nalo.
Okwangoku sele bendityhalele ukuba ndithenge iPC yedesktop, kuba andizukuchitha i-1000 kwiMacMini enezixhobo ezingasasebenziyo. Kwaye ndiyathemba ukuba baya kulungisa kunye neelaptops, kungenjalo ndiza kuqhubeka ne-2011 MBP yam, eyayinokwandiswa, kwaye ndinayo nge512 SSD kunye ne-16Gb yememori. Kodwa xa isilela, sele ndicinga ngeSurface Book 2 xa iphuma.
Ndiphoxekile yi-apile, ngaphandle kwe-iphone yayo, ndinokonwaba.
Apple patent iMagSafe kwi-USB-C yokutshintsha iiMacBooks
UApple ufuna uSiri aphendule kuwe ngokwazi ilizwi lakho